Hery Rajaonarimampianina Tsy hanaiky hala-bato
Antenimieram-pirenena Malagasy Fa inona marina, ahoana ny fiasany ?
Andrim-panjakana iray anisan’ny hiankinan’ny fiainam-pirenen’ity nosy misy antsika ity ny Antenimieram-pirenena Malagasy amin’ny ankapobeny. Rariny raha mba hofantarintsika olom-pirenena tsy an-kanavaka amin’izao ankatoky ny fifidianana solombavambahoaka izao ny tantaran’ny Antenimieram-pirenena Malagasy sy ny asany ary ny fomba firafiny sy fomba fiasan’izay depiote ho lany ao ary ny tombontsoa maro samihafa mety ho azo ao. Hisy ihany karazana fanehoan-kevitr’ireo depiote nahavita taom-piasana maromaro nifandimby tao. Farany, hotsiahivintsika etoana ny anaran’ireo filoha nifandimby nitantana an’ity Antenimieram-pirenena Malagasy ity hatramin’ny niandohany ka hatramin’ny taona 2018 teo.
Efa tena tany miady i Madagasikara Nahetsika ny miaramila
Ny polisy (an-tanàn-dehibe) sy ny zandary (any ambanivohitra) no mitandro ny filaminana sy ny fandriampahalemana raha ny mahazatra. Ankehitriny anefa nahetsika an-tanàn-dehibe ary nalefa amina distrika maro ny miaramila izay manda farany amin’ny fiarovana ny firenena. Tranga izay toa mampiseho fa efa tany miady i Madagasikara.
Rivo Rakotovao Namaly bontana ireo te hanongana azy
Maro no niandry sy nanongilan-tsofina nanaraka ny onjam-peon’ny Top Radio 102.8FM omaly na teto an-tanindrazana na hatrany ampitan-dRanomasina tamin’ny alalan’ny tranonkala https://www.radioking.com/radio/topradio-102-8?redirect nihaino ny fanehoan-kevitry ny filohan’ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao, ary filoha nasionalin’ny Antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) teo aloha omaly. Anisan’ny antoko mbola tanora ny HVM ny taonany izay 5 taona izao, fa nandray anjara feno tamin’ny fifidianana ben’ny tanàna, loholona, filoham-pirenena, ary manana ny paikadiny amin’izao fifidianana depiote izao.
Nanao fanambarana omaly ny filoham-pirenena teo aloha sady kandida, Hery Rajaonarimampianina.
Nambarany fa be ireo tsy fetezan-javatra nitranga nandritra iny fifidianana iny ary maro ihany koa ireo tranga teknika hafahafa tsikaritra. Ohatra amin’izany ny fahitana taratasim-pifidianana tsy ara-dalàna, ny fahataran’ny fametrahana ireo fitaovana ilaina amin’ny fampandehanana ny fifidianana, ny fifampihantsiana sy ny fisiana bileta voamarika mialoha ary fitaovana tsy tokony hampiasaina mandritry ny fotoana fandatsaham-bato. Manoloana izany dia nanao antso avo amin’ny Malagasy rehetra ny filoha teo aloha mba ho mailo mandritry ny fotoam-pamoahana ireo vokatra tsy ofisialy. Ny zava-miseho rehetra, hoy izy, dia mahatonga ahiahy ny amin’ny fisiana familiviliana safidim-bahoaka. Farany moa dia nanao antso avo an’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana na CENI ny tenany handray ny andraikiny. Tsy ekena ny fangalarana ny safidim-bahoaka ka dia matoky ireo manampahefana fa handray ny andraikiny, hoy izy.